Society & Lifestyle » ဘီအီးတခွက် သာခိုမမက်	28
ဦးဦးပါလေရာ says: သယ်….
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: စော်ဒဂါး မော်ဒဂါးလုပ်နဲ့ 
Tawwin Pan says: တခါတုန်းက မှတ်တိုင်နားမှာ စက်ဘီးစီးလာတဲ့သူရဲ့ ခါးပုံအိတ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံထောင်တန်တွေ ထွက်ကျ လာတယ်……မှတ်တိုင်ကသူတွေ လှမ်းအော်တော့ ပြန်လှည့်လာပြီး လမ်းပေါ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေ လိုက်ကောက်တာပေါ့….မှတ်တိုင်မှာကားစောင့်နေတဲ့သူတွေကလည်း ဝိုင်းကောက်ပေး..တချို့တွေကတော့ အိတ်ထဲထည့်ကျတာပေ့ါ…….လိုင်းကားပေါ်ကသူတွေကလည်း ဝိုင်းကောက်နဲ့……အနားကသူတွေက ပိုင်ရှင်က ဒီမှာဆိုပြီး ပြောတာတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ကောက်နေကြတာ……..၄၅ ဟိုင်းလပ်ကားခေါင်းခန်းမှာ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ ရုပ်ခန့်ခန့်ယောင်္ကျားကြီးကလည်း ခေါင်းခန်းကနေ ခဏဆင်းပြီး ပိုက်ဆံဆင်းကောက်ပြီး ပိုင်ရှင်သိရဲ့သားနဲ့ ပြန်မပေးဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ကားပေါ်ပြန်ထိုင်နေလေရဲ့…..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အတော်ဆိုးတဲ့လူကြီး
kai says: မြန်မာပြည်မယ်… ထေရာဝါဒ..၀ါဒီတွေဒီလောက်ပေါတာ…
အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့.. လုံးဝမထင်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6338
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အကောင်းမြင်ပါ တဂျီး
kai says: ဖဘမှာလည်း ဒေါ်ဒေါ်ပဒုမ္မာအပါအ၀င်.. ဗမာတော်တော်များများက.. ရာသီဥတုဖေါက်တာ.. လူတွေစိတ်ထားဘာညာဆိုပြီး ဘုန်းကြီးစကားကိုးကားထားတယ်..
အကျိုးအကြောင်း.. အဆက်အစပ်.. အဲဒါပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6338
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ဟယ်…. အဲသလို
မြစပဲရိုး says: အစိမ်းရောင် သစ်ပင်သစ်တော ပြုန်းတာ လူ တွေ ရဲ့ လောဘ မဟုတ်လို့ ဘာကြောင့်တုန်း။
သူ့ဟာသူ ခြေပေါက်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်လား မသိ။ Was this answer helpful?LikeDislike 6338
Yae Myae Tha Ninn says: အဲသဟာထက် ဆိုးတာ ရှိတယ်… ဖွင့်ပွဲတခုမှာပေါ့… ရာထူးကြီး ဟိတ်ဟန်တခွဲနဲ့ ဆရာကြီးက ပိုက်ဆံကြဲဖို့ တာဝန်ယူထားပါတယ်… ဖလားက သူ့လက်ထဲမှာ… တကယ်တမ်း ကြဲတော့ … အဟင့်… အတန်သေးတွေ အပြင်ကို ကြဲပြီး အတန်ကြီးကို သူ့နားကြဲ ဖိနပ်နဲ့ ဖိထားတယ်… တား လဲ နားကို မလည်နိုင်တော့ဘူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 110
Tawwin Pan says: ရပ်ကွက်ထဲကအလှူတစ်ခုကတော့ ၂၀တန်လေးမှာ ရွှေထည့်ပြီး ကြဲတာ…ဘယ်သူမှ မကောက်ကြဘူး…
Ma Ma says: အဲဒီသတင်းကိုကြားပြီး အမျိုးမျိုး ကွန်မန့်တွေ ပေးကြတယ်။
လူတွေရဲ့ mind-set ကို ပြုပြင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းက မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: မီးသွေးဆိုရင်တော့ နာ ခိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သူများနိုင်ငံတွေ သတင်းစာ အဲဒီပုံရောင်းနေတာဖြင့် ကြာလှပြီ။ တကယ်ဆိုရင် ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ဟာ အလုပ် ဟူသမျှထဲမှာ အမိုက်မဲဆုံးအလုပ်လို့ ထင်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို မိုးလင်းမိုးချုပ် ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ရောင်းပစ်လိုက်တာ။ ဘ၀အရည်အသွေးဆိုတာကို ဘာလို့ ထည့်မစဉ်းစားရမှာလဲ။ အခု လို ငွေယားကလေးအတွက် ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးရောင်းရမယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေက ပိုနှမျောစရာကောင်းတယ်။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အဲထက် ပိုနှမြောစရာကောင်းတာဂ ရောင်းသူမဲ့ ဆိုင်ဆိုဘီး
နံကြားထောက်ပြောမယ် နောင် နှစ်တထောင် ပြီးဒေါ့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟုတ်ပါ့ ဒီတစ်ခါ မျောက်ကို ဆရာတင်လိုက်ပြီ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: သိချင်သေးတယ်
ဘယ်အုပဒေနဲ့ရှင်းမလဲလို့ဒီရာသီ မီးသွေးက ပြဿနာမရှိ
Ma Ma says: သာခိုသာမက်ရေ-
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ကျော် ယူဒါဟုတ်ဘူးနော်
မြစပဲရိုး says: သူများ နိုင်ငံ တွေမှာ သူခိုး နဲ တယ် ဆိုတာက အလွယ် ယူလို့ မရအောင် နည်းလမ်း၊ စည်းကမ်း တွေ ကောင်းလို့ပါ။
စိတ်ဓာတ်ပြင်ချင်ရင် အရင် လူတွေ ကို အရှက်တရား (ကိုယ့်ကို လူတွေ က စာရိတ္တမခိုင်သူ လို့ မြင်မှာ) နဲ့ အကြောက်တရား (မဟုတ်တာ လုပ်ချိန် တရားဥပဒေ က စောင့်ပြီး အရေးယူမှာ) ရှိဖို့ အရင် ပညာပေးရ မယ် ထင်တာပါဘဲ။ ဒီမှာလဲ စီစီတီဗီ တွေ အနှံ့ထားတာ အလကားမှ မဟုတ်တာ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: လူမျိုး နိုင်ငံရယ်နဲ့ မဆိုင်
Ma Ma says: (လူတွေ ကို အရှက်တရား (ကိုယ့်ကို လူတွေ က စာရိတ္တမခိုင်သူ လို့ မြင်မှာ) နဲ့ အကြောက်တရား (မဟုတ်တာ လုပ်ချိန် တရားဥပဒေ က စောင့်ပြီး အရေးယူမှာ) ရှိဖို့ အရင် ပညာပေးရ မယ် ထင်တာပါဘဲ။)
အဲလိုပြုပြင်မှရမှာကို အခုလိုလုပ်နေတာက စောနေသလား၊ မှားနေသလားလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6338
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: စိတ်ဓာတ်ပြင်ချင်ရင် ယာဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းဖွင့်လေ
Thint Aye Yeik says: ဟန်းစက်တို့ အဝတ်အထည်တို့ကို..အဲ့နည်းနဲ့ ချရောင်းလို့ကတော့….
ဘာပြောကောင်းမလဲ…. အအေးတစ်ဗူး သုံးရာလောက်က… ပန်းရံလုပ်တဲ့သူလည်း ခိုးဝှက် သောက်ရလောက်အောင်..
.ငွေများများပေးမှ ရမယ့်ဟာတွေကို အဲ့လိုချပေးထားကြည့်ရင်… စိတ်ဓါတ်မကောင်းသူတွေ ပေါ်လာလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်းလို့…ထင်မိ… ဆိုတော့…
အန်တီမမနဲ့ သဘောချင်း တူပါကြောင်း… Ma Ma says:
လူတွေရဲ့ mind-set ကို ပြုပြင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းက မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: ဆေးသမားအရက်သမားတွေနည်းအောင်ပဲအရင်လုပ်ပါအုန်းလေ
ဦးကြောင်ကြီး says: စိန်မျောက်မြောက်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဖြစ်နိုင်ဖို့ဝေးပါသေးကွာ